Maxaabiis Soomaaliyeed oo maanta dib loogu soo celiyay dalka – Bandhiga
Maxaabiis Soomaaliyeed oo maanta dib loogu soo celiyay dalka
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soo degtay diyaarad siday 124 qof oo Soomaali ah kuwaa oo ku xernaa xabsiyada dalka Liibiya.
Maxaabiistan Soomaaliyeed ayaa isugu jiray rag, dumar iyo caruur, waxaana Wajiyadooda ka muuqday dhibaatooyin ay la kulmeen intii ay ku jireen xabsiyadda dalkaasi.
Waxaa Garoonka diyaaradaha ee Magaaladda Muqdisho dhalinyaradaasi kusoo dhaweeyey Wasiiro iyo Masuuliyiin kale oo ka tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Qaar ka mid ah dhalinyaradda Muddada dheer ku xiranaa Xabsiyadda Liibaya ee nasiibka uu yeeshey in Dawladda Soomaaliya ay Dalkooda dib ugu soo celiso ayaa ka hadlay Dareenkooda, iyaggoo soo dhaweeyey dadaalka Dawladda ay u gashay in laga soo saaro Xabsiyadaasi.
Ergeyga gaarka ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan ka-hortagga Tahriibka iyo Xuquuqda Caruurta Marwo Maryan Yaasin Xaaji Yuusuf ayaa ugu mahad celisay sida Dawladda Soomaaliya ay xil isaga saartay soo deynta dhalinyaradaasi.
Dawladda Soomaaliya ayaa ku Guuleysatay in boqolaal dhalinyaro ah ay ka soo deyso Dalalka Itoobiya, Indiya, Siishelis iyo Liibiya, waxaana ay sheegtay in ka shaqeyneyso siddii ay dalka ugu soo celin lahaayeen dhalinyaradda kale ee ku xiran dalka dibadiisa